Yakobo 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Yakobo,+ Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo akoa,+ de kɔma mmusuakuw dumien+ a wɔabɔ apete+ no. Mikyia mo! 2 Me nuanom, sɛ muhyia sɔhwɛ ahorow pii a, mummu no anigye koraa+ 3 na munhu sɛ mo gyidi a wɔasɔ ahwɛ yi bewie boasetɔ mu.+ 4 Na momma boasetɔ nwie n’adwuma na moayɛ pɛ+ adi mũ biribiara mu a hwee nhia mo.+ 5 Enti sɛ ɛka mo mu bi nyansa+ a, ma ɔnkɔ so ara mmisa Onyankopɔn+ efisɛ oyi ne yam ma nnipa nyinaa ade a ahohora biara nnim,+ na ɔde bɛma no.+ 6 Nanso ma ɔnkɔ so mmisa+ wɔ gyidi mu; ɛnsɛ sɛ n’adwenem yɛ no naa koraa,+ efisɛ nea n’adwenem yɛ no naa no te sɛ po asorɔkye a mframa bɔ+ de no di akɔneaba. 7 Mma obi a ɔte saa nnsusuw da sɛ obenya biribi afi Yehowa hɔ;+ 8 ɔyɛ onipa a n’adwene yɛ ntanta,+ ohinhim+ wɔ n’akwan nyinaa mu. 9 Na ma onua a onni bi nni ahurusi sɛ wɔama no so,+ 10 na ɔdefo+ nso sɛ wɔabrɛ no ase, efisɛ obetwam akɔ sɛ wuram nhwiren.+ 11 Na owia pue hyehyeehyew na ɛhyew wura ma ne nhwiren po na n’ahoɔfɛ sɛe. Saa ara na ɔdefo nso asetena kwan betwam akɔ.+ 12 Anigye ne nea ɔkɔ so gyina sɔhwɛ mu,+ efisɛ sɛ wogye no tom a, ne nsa bɛka nkwa abotiri+ a Yehowa de ahyɛ wɔn a wɔkɔ so dɔ no no bɔ no.+ 13 Sɛ sɔhwɛ+ to obi a, ɛnsɛ sɛ ɔka sɛ: “Onyankopɔn na ɔresɔ me ahwɛ.” Efisɛ wontumi mfa nnebɔne nsɔ Onyankopɔn nhwɛ, na ɔno nso nsɔ obiara nhwɛ. 14 Mmom nea ɛsɔ obi hwɛ ne n’ankasa akɔnnɔ a ɛtwetwe no na ɛto no brada.+ 15 Afei sɛ akɔnnɔ no nyinsɛn a, ɛwo bɔne;+ na bɔne no nso nyin a, ɛwo owu.+ 16 Me nuanom adɔfo, mommma wɔnnnaadaa mo.+ 17 Akyɛde+ pa ne adekyɛde a ɛyɛ pɛ biara fi soro;+ efi hann Agya+ no nkyɛn, na sunsuma a ɛsakra na ɛdannan nni ne mu.+ 18 Esiane sɛ ɛyɛ ne pɛ+ nti, ɔde nokwasɛm no woo yɛn+ sɛnea yɛbɛyɛ n’abɔde mu aba a edi kan.+ 19 Munhu eyi, me nuanom adɔfo. Obiara nyɛ ntɛm ntie asɛm, ɔnyɛ nyaa nkasa,+ na ɔnyɛ nyaa mfa abufuw;+ 20 efisɛ onipa abufuw nna Onyankopɔn trenee adi.+ 21 Enti montow efĩ nyinaa ne bɔne a ɛyɛ adesoa hunu no ngu,+ na mumfi odwo mu mma wɔntɛw asɛm+ a ebetumi agye mo kra nkwa no mo mu.+ 22 Na monyɛ asɛm no yɛfo,+ na monnyɛ atiefo nko mfa nsusuwii hunu nnaadaa mo ho.+ 23 Na sɛ obi yɛ asɛm no tiefo, na ɔnyɛ ne yɛfo+ a, ɔte sɛ onipa bi a ɔhwɛ n’anim* ahwehwɛ mu. 24 Ɔhwɛ ne ho na ɔkɔ, na ntɛm ara ne werɛ fi onipa ko a ɔyɛ. 25 Na nea ɔhwehwɛ ahofadi mmara a ɛyɛ pɛ+ no mu na ɔtena mu no, n’ani begye+ sɛ ɔreyɛ saa efisɛ wabɛyɛ adwuma no yɛfo+ na ɔnyɛ otiefo werɛfirifo. 26 Sɛ obi bu ne ho sɛ ɔyɛ onyamesomfo+ nanso ɔnto ne tɛkrɛma nnareka,+ na mmom ɔkɔ so daadaa ne koma+ a, onipa a ɔte saa no som yɛ ɔkwa.+ 27 Ɔsom a ɛho tew+ na efĩ biara nni ho+ yɛn Nyankopɔn ne Agya no ani so ne eyi: sɛ obi bɛhwɛ nnyanka+ ne akunafo+ wɔn ahohia mu,+ na watwe ne ho afi wiase+ nkekae+ ho.
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne “anim a wɔde woo no.”